Baarlamaanka oo Ka Shiraya Arintii Qalbi Dhagax Iyo Muqdisho oo Mudaharaad Ku Taageertey Dawlada Muqdisho + Sawiro – Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Baarlamaanka oo Ka Shiraya Arintii Qalbi Dhagax Iyo Muqdisho oo Mudaharaad Ku Taageertey Dawlada Muqdisho + Sawiro
Home  Wararka  Baarlamaanka oo Ka Shiraya Arintii Qalbi Dhagax Iyo Muqdisho oo Mudaharaad Ku Taageertey Dawlada Muqdisho + Sawiro
Wararka September 13, 2017
Baarlamaanka Somalia ayaa goor dhoweyd bilaabay dooda C/kariin Qalbi Dhagax kaas oo ahaa sargaal ka tirsan Onlf oo ay Dowladda Somali ku wareejisay Itoobiya.
175 mudane ayaa la sheegey inay soo xaadirtay kulanka maanta oo uu shir gudoominayo guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Ilaa iyo hada dhowr mudane ayaa la sheegey inay is qoreen si ay u hadlaan sidda ay sheegeen wariyaasha goobta jooga.
Xukuumadda Somalia ayaa Baarlamaanka usoo gudbisay 15 hidise sharciyeed laakiin waxaa uu gudoonka Baarlamaanku go’aansaday in laga hormariyo ka doodista arinta Qalbi Dhagax, maadaama ay arintani aad u kacsantahay.
Kiiska sargaalkaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay ahaa waxa ugu badan ee ay hadal hayaan siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed, khaasatan Muqdisho.
Dhinaca kale waxaa maanta ka dhacey magaalada muqdisho mudaharaad lagu taageerayo xukuumada Farmaajo iyo Kheyre sida ay ilaa iyo hada wax u wadaan. Shacabka muqdisho ayaa ku doodaya in markii ay musuqmaasuqii yareysay xukuumadu ay keentey in amnigii shacabka muqdisho aad isu bedeley iina u wanaagsanaadey.